ट्वीटरका संस्थापक डोर्सीको पहिलो ट्वीटको मूल्य २५ लाख डलर ? राखियाे लिलामीमा - Nepalese Times
ट्वीटरका संस्थापक डोर्सीको पहिलो ट्वीटको मूल्य २५ लाख डलर ? राखियाे लिलामीमा
नेप्लिज संवाददाता २३ फाल्गुन २०७७, आईतवार १५:४७ (1 महिना अघि) ११४ जनाले पढ़िसके
सानफ्रान्सिस्को, २३ फागुन । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरका संस्थापक ज्याक डोर्सीले आफूले गरेको पहिलो ट्वीट बिक्रीका लागि लिलामीमा राखेका छन् । उनको त्यो पहिलो ट्वीटलाई शनिबार २५ लाख डलरमा लिलामीमा स्वीकार गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत भएको थियो ।
डोर्सीले बिक्री गर्न खोजेको उक्त ट्वीटलाई ब्लकचेन टेक्नोलोजी मार्फत भर्चुअल वस्तुका रुपमा बिक्री गरिने छ । सन् २००६ मार्च २१ मा डोर्सीले ‘जस्ट सेटिङ अप माई ट्वीटर’ अर्थात् ‘भर्खरै मैले ट्वीटर खाता खोलें,’ भनेर घोषणा गरेका थिए ।
डोर्सीको उक्त ट्वीट डोर्सी र ट्वीटरले अनलाइनबाट नहटाउँदासम्म सबैले अनलाइनमा देख्न पाउने छन् । आजभोलि महत्वपूर्ण क्षणका घटनाक्रमलाई ‘नन–फंगिबल टोकेन ९एनएफटी०’ मार्फत सुरक्षित गरी बेच्न सकिने बनाइएको छ । गत महिना अमेरिकी बास्केटबल खेलाडी लिब्रोन जेम्सको एउटा क्षण ९टप सट०को भिडियोले २ लाख ८ हजार डलर कमाउन सफल भएको थियो ।